Nahoana no toa mitaredretra ny fiavian’i Kristy?
«Fa izao no lazaiko, ry rahalahy: efa fohy ny andro» 1 Kôr. 7:29.
Manambara ireo anjelin'Andriamanitra ao amin'ny hafatra ho an'ny olona fa fohy ny fotoana. Toy izany hatrany no nanehoana izany tamiko. Marina fa naharitra ela kokoa noho izay nokendrena tamin'ny fiandohana ilay hafatra. Tsy niseho tamin'ny fotoana nanantenantsika izany ny Tompontsika. Diso ve anefa ny tenin'ny Tompo? Sanatria! Tsy tokony hohadinoina fa ny fampanantenana sy ny fampitandreman'Andriamanitra dia misy fepetra avokoa.
Nametraka asa mba hovitaina eto an-tany tamin'ireo vahoakany Andriamanitra. Natao homena ny hafatry ny anjely fahatelo, natao hotarihina ho an'ny fitoerana masina any an-danitra, toerana nidiran'ny Kristy mba hisolo voina ny vahoakany, ny sain'ireo mpino. Tokony harahina ny fanavaozana momba ny Sabata. Tokony hamboarina ny fanitsakitsahana ny Ialàn'Andriamanitra. Tokony hambara amin'ny feo avo ny hafatra mba handrenesan'ny mponina rehetra eto ambon'ny tany ny fampitandremana. Tokony hanadio ny fanahiny amin'ny fankatoavana ny fahamarinana sy amin'ny fiomanana hijoro tsy misy pentina eo anatrehany amin'ny fiaviany ny vahoakan'Andriamanitra.
Ireo Advantista, taorian'ny fahadisoam-panantenana lehibe tamin'ny 1844, moa nitana tamim-pahatokiana ny finoany sy niara-nitozo teo amin'ny fiantombohan'ny fiahian'Andriamanitra, nandray ny hafatry ny anjely fahatelo sy tao amin'ny herin'ny Fanahy Masina izay nanambara izany tamin'izao tontolo izao, (...) fa niasa tamin-kery lehibe niaraka tamin'ny ezaka nataon'izy ireo ny Tompo; tokony ho vita ny asa ary ho tonga nialoha izany i Kristy mba handray ny vahoakany ho valin'ny asany.
Saingy tao anatin'ny fotoam-pisalasalana sy ny tsy fahazoana antoka izay nanaraka ny fahadisoam-panantenana dia mpino advantsita maro no nandao ny finoany. (...) Tamin'izany no nampitsahatra ny asa ka navela tao anatin'ny haizina izao tontolo izao. (...)
Nandritra ny efapolo taona no nandroahan'ny lsraely fahiny tao amin'ny tany Kanana ny tsy mpino, ireo mpimonomonona ary ireo mpanohitra. Ireo fahotana ireo koa no nampitaredretra ny fidiran'ny Isiraely ankehitriny ho ao amin'ny Kananan'ny lanitra. Tsy nisy fotoana nahadiso ny fampanantenan'Andriamanitra. Ny tsy finoany, ny fitiavana izao tontolo izao, ny tsy fanamasinana ary ny ady eo amin'ireo olona izay ambaran'ny Tompo no mitazona antsika eto amin'ity tany feno fahotana sy fahoriana nandritra ny taona maro. SIM 1:67-69.